Ifenisha Yase-Classic, Umbhede We-Classic kanye Nomakhi WeSofa | u-James Bond
Ifenisha yasendulo yokunethezeka
Indalo ngayinye ingumsebenzi wobuciko ngempela.
Ifenisha yesofa yakudala iJames Bond 14k igolide nokhuni oluqinile onsundu okhanyayo usofa A2820
ISIHLOKO I-Classic Light brown 14k yegolide nesofa eliqinile lezinkuni. ISIQINISEKISO SOMkhiqizo Indwangu: I-French beech \_ Isikhumba \_ 14k igolide. Isihlalo esisodwa 135Wx105Dx117H Izihlalo ezimbili 196Wx123Dx149H Izihlalo ezintathu 255Wx123Dx149H Izihlalo ezine 302Wx123Dx149H
I-James Bond Classic kagesi etafuleni lokudlela eliyindilinga nezinkuni eziqinile ngopiyano we-upiyano uBrown JF522
ISIHLOKO Igolide le-Classic Brown negodo eliqinile ne-piano resin upende kagesi wokudla oyindilinga ukwazi ISIQINISEKISO SOMkhiqizo Indwangu: I-French beech Ubukhulu: I-220W × 220D × 76H I-300W × 300D × 76H 380W × 380D × 76H Umbala wezinkuni: QHAWULA
Ifenisha yesofa yasendulo engu-14k igolide negolide eliqinile leni & champagne A2819 James Bond
ISIHLOKO Ifenisha yesofa kaJames Bond Classic 14k yegolide kanye igolide eliqinile lokhuni & champagne A2819 ISIQINISEKISO SOMkhiqizo Indwangu: Frenchbeech \_ Isikhumba \_ 14kgold Izinto zesitulo: Isikhumba Umbala wesikhumba: Umbala onsundu Umbala wezinkuni: I-Champagne
I-James Bond Classic sofa design 14k igolide nolwandle oluqinile i-A2825
Ifenisha ye-james bond ibilokhu igxile efenishani esezingeni eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-classic iminyaka engu-18. Amakhasimende amaningi athi ifenisha yeJames Bond yenza ifenisha yakudala efana nefenisha yasendulo yase-Italy. Yebo, sithumela ithimba lethu lokukhiqiza kanye nethimba le-Italy minyaka yonke ukuze lifunde ubuchwepheshe bokukhiqiza nomqondo wokuklama wefenisha yase-Italiya yase-Italy, ukuze ifenisha engcono kakhulu yakudala ingalethwa kumakhasimende emhlabeni jikelele.Isethi yethu yeSofa ye-Classic ithandwa kakhulu ngoba iphathwa kahle kuyo yonke imininingwane, yethula umuzwa obucayi, umuzwa kanokusho kanye nomuzwa wakudala.
Ama-villa ahle anefenisha enhle ye-classic - eyabiwe amakhasimende avela eNigeria
Ama-villas amahle futhi anethezeka adinga ukufaniswa nefenisha yakudala ngokunambitha kanye nokunethezeka okufanayo. Ngenxa yamakhasimende aseNigeria ngokuthembela kwabo nokuthanda ifenisha yefenisha yeJames Bond, ifektri yethu inomlando weminyaka engama-36. Inqubo yokukhiqiza ivuthiwe kakhulu, futhi ikhwalithi nayo ilungile kakhulu.Ifenisha yakudala yeJames Bond Fenity ithengiselwa amazwe angama-35 ahlukene, ehlanganisa imindeni emihle engama-5000. Ifenisha yefenisha yeJames isibe ngomunye wemikhiqizo ephezulu yefenisha yakudala eChina kanye nemikhiqizo ephezulu yefenisha yakudala yefenisha emhlabeni. Ngiyethemba amakhasimende amaningi angakhetha iJames Bond Age Classic Felication!
Ifenisha yase-Italian Classic Fenus Classic - kusuka kufenisha yeJames Bond
Ngiyabonga amakhasimende ase-Italy ngokusekelwa kwawo nothando lwawo ngefenisha yethu yeJames Bond. Sinolwazi kakhulu ekukhiqizweni kwefenisha yakudala, ngoba sineminyaka engu-18 yokukhiqiza isipiliyoni, futhi sethula futhi imishini yokukhiqiza yase-Italy yase-Italy kanye nobuchwepheshe be-Italian Production. I-admatic International Envishinivite Depection Paint, isebenzisa izinto eziphakeme ezisezingeni eliphakeme, futhi ineminyaka engu-15 ihlangabezana nokukhiqizwa kwengcweti kwezobuciko, ekugcineni iveza ubuhle, iveza okunethezeka!Ifenisha yeJames Bond manje isemazweni amaningi afana, asetshenzisiwe, sizoqhubeka nokusebenza kanzima, qhubeka nokukhiqiza ifenisha enhle kakhulu ye-classic ukuhlinzeka amakhasimende amaningi!
Iphrojekthi yekhwalithi yeNingizimu Afrika - Ifenisha ye-Luxury Classic kusuka kufenisha yeJames Bond
Okokuqala, ngithanda ukubonga amakhasimende aseNingizimu Afrika ngokusekelwa kwabo, kanye nokwesekwa kwabo nothando lwefenisha yethu yeJameson. Ifenisha elandelayo yakudala ihlinzekwa yifenisha yeJames Bond, ifenisha yethu esezingeni eliphezulu ye-Classic ithengiselwe amazwe angama-35. Sizama nokuvumela amakhasimende amaningi emazweni amaningi azi ukuthi ifenisha yethu yeJames Bond kanye nefenisha yethu yakudala enokunambitheka nokuthungwa.
Iphrojekthi yeKhasimende laseHong Kong - Ifenisha yekhwalithi yekhwalithi evela kufenisha yefenisha yeJames
Ukwaneliseka kwamakhasimende kungamandla ethu amakhulu kunawo wonke. Kungumsebenzi wethu ukuklama, ukukhiqiza nokuthengisa ifenisha yakudala ngenhliziyo yethu. Njalo lapho sihle kakhulu ukuqeda umsebenzi osinikezwe ngawo ngamakhasimende kaninginingi, umuzwa omuhle, osezingeni eliphakeme, onobuciko wefenisha yakudala yomndeni omuhle ngemuva komunye.Ifenisha ye-James Bond ineminyaka engama-36 yomlando, ubuchwepheshe bethu bokukhiqiza buvuthiwe, ubuchwepheshe buya ngokuya buthuthuke kakhulu, khetha ifenisha ephezulu ye-classic, ifenisha yefenisha yeJames eqeda kahle!